ဆုံဆည်းရာ: ဘ၀နေညိုချိန်အထိ ချမ်းသာခွင့်မပေးသော အာဏာရှင် နှင့် ခရိုနီများ
ပင်စင်လစာငွေတွေကို Smart card ဖြင့် ထုတ်ရမည်တဲ့။ ဓာတ်ဆီထုတ်သည့် Smart card သည် ကျပ် ၅၀၀ ပေးရသော်လည်း သူတို့၏ Smart Card သည် ၃၀၀၀ ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ပင်စင်စားဦးရေ ၈ သိန်းကျော်နှင့် နိုင်ငံရေး ပင်စင်စား ဦးရေ ၄၀၀၀၀ ခန့် ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒါဆိုလျင် ပင်စင်စား ၉ သိန်း နီးပါးအတွက် Smart card လုပ်(စား)သူ (Cronies) များသည် ကျပ်သိန်းပေါင်း နှစ်သောင်းလေးထောင် (သိန်းပေါင်း၂၄၀၀၀) အသာလေး ရသွားလေ သည်။ မြန်မာပြည်မှာငွေရှာရတာ တော်တော်လွယ်သားပဲနော် . . .
ကျွန်တော်သိချင်တာတွေ အများကြီးပါ။ အဆိုပါ Smart card ကို ဘယ်က ရသလဲ။ နိုင်ငံခြားကရလျှင် နိုင်ငံခြားက ၀ယ်ရသည်။ ဘယ်လောက် ကျလဲ။ ဒီမှာ Software တွေရေးရတာ ဘယ်လောက်ကျလဲ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာမရှိလို့ သူတို့ဆီက ၀ယ်ရတာ ကောင်းပါသည်။ သို့သော် တကယ် ဒီလောက်( သိန်းပေါင်း နှစ်သောင်းလေးထောင်ကျော်) ကုန်ကျသလား ဆိုတာပါပဲ။ ဒီ Smart card ကလည်းတကယ် လိုအပ်လျင်တော့ ကောင်းပါသည်။ ဓာတ်ဆီ Smart card သည် ဓာတ်ဆီဆိုင်က မသမာလုပ်သောကြောင့် ဖြစ်လာသည်။ သူတို့နှင့်အတူ စားသုံးသူအချို့ ပေါင်းလုပ်သည်။ ထိုအတွက် နိုင်ငံခြားကို ပိုက်ဆံပေးလိုက်ရသည်။ ပင်စင် Smart card က ဘာကြောင့် လုပ်တာလဲ။ နိုင်ငံဝန်ထမ်း ပင်စင်စားများက မသမာ လုပ်ကြလို့လား . . .
ကျွန်တော်တို့ ဆင်းရဲပါသည်။ အရှေ့တောင်အာရှတွင် အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲသည့်အထဲ အနှိပ်စက်ခံဖြစ်ရတာကိုတော့ ၀မ်းနည်းဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။ ပြည်သူကို ကြင်နာပါ။ အထူးသဖြင့် ဘ၀နေညိုချိန် နောက်ဆုံးရောက်ရှိတော့မည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ပင်စင်စားများကိုတော့ ချမ်းသာ ခွင့်ပေးလိုက်ကြပါဗျာ . . .
၀ါသနာ၊ စေတနာ၊ အနစ်နာခံ ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော ပင်စင်စားများအတွက် ကိုယ်ချင်းစာ အသည်းနာရပါသည်။ ref; ဒေါက်တာခင်မောင်ညို